Sidee looga ganacsadaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo leh tilmaame ADX? | vfxAlert official blog
ADX - faaiido laga helo dhaqdhaqaaqa suuqa
Ku ganacsashada isbeddelka ayaa weli ah istiraatiijiyadda ugu faa'iidada badan, sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah . Waa lagama maarmaan in la go'aamiyo oo keliya jihada laakiin sidoo kale xoogga dhaqdhaqaaqa. Tusaha ADX ayaa kaa caawin doona inaad si sax ah u furto xulashada.
Celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa (EMA) celcelis ahaan soconaya 50 . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsaneynaa oo keliya haddii qiyaasta ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee calaamadaha bilaashka ah ay ugu yaraan yihiin 15-25 dhibcood!
ADX (Isugeynta Tilmaanta Dhaqdhaqaaqa Jihada) . Xaqiijinta joogitaanka, jihada iyo xoogga isbeddelka. Jihada waxaa go'aaminaya khadadka + DI iyo -DI, khadka ADX-na waa tilmaame ku saabsan xoogga isbeddelka. Haddii + DI uu ka sarreeyo -DI, suuqa waa mid kor u kacay. Hoos u dhaca hoos u dhaca, waxaan ku eegeynaa xaaladaha ka soo horjeedka adeegyada calaamadaha xulashooyinka.
Tilmaamuhu lama heli karo dhammaan goobaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah. Xaaladeena, kani waa dillaal Binary.com. Haddii barxadda aysan lahayn tilmaamayaasha lagama maarmaanka ah, waxaad ku soo dejisan kartaa bilaash internetka iyo waxaad u isticmaali kartaa meel kasta oo ganacsi oo kale (tusaale ahaan, MetaTrader) oo ah calaamado lagu furayo ikhtiyaarka koontadaada .
Ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah :
KAC (WAC) - ikhtiyaar . Qiimuhu wuu ka sarreeyaa Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Khadadka ADX ayaa kor u kacaya; histogaraam casaanka ayaa ka hooseeya heerarka eber.
FALL (PUT) - doorasho . Xaaladaha iska soo horjeedda: qiimaha ayaa ka hooseeya Celceliska Dhaqdhaqaaqa; ADX hoos ayuu udhacay, histogaraam cagaaran.
Fur ganacsi shumaca xiga kadib ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo toos ah u socda. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa inuu ka yaraan 5-7 daqiiqo xitaa haddii waqti shaqeed ahaan loo doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena .
Ficil ahaan, isbeddelka ADX ayaa aad uga muhiimsan heerarka qiimaha gaarka ah. Inkasta oo khadka tilmaamuhu uu kordhayo, waxaan raadineynaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo loogu talagalay dib-u-noqoshada EMA iyada oo loo eegayo xaalad gelitaan suurtagal ah, iyada oo aan daruuri ahayn in la gaaro heerka 30. Jiritaanka isbeddel, waxay ku filan tahay Khadka ADX si tartiib tartiib ah uga koraan ugu yaraan. Tilmaamuhu wuxuu ka sarreeyaa 50, isbeddelka hadda socdaa wuu dhammaanayaa; waxaan ka harnaa suuqa.
Waxaan xakameyneynaa dhaqdhaqaaqa miisaanka suuqa. Haddii ay dhacdo kala-soocid ama ka-soo-noqoshada Celceliska Dhaqdhaqaaqa, qiyaasta histogaraamku waa inuu lahaadaa qiyamka ugu sarreeya.
Haddii dallaalku uu suurtogal ka dhigo in la xiro ikhtiyaarka ka hor inta aanu dhicin, waan qabannaa (xitaa haddii faa'iido tahay!) Marka ay soo ifbaxdo calaamadda ka soo horjeedda.
Tilmaamaha ADX wuxuu siiyaa natiijooyin wanaagsan dhammaan xeeladaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah iyo hantida (lacagaha, saamiyada, cryptocurrencies). U hogaansanaanta qawaaniinta xeeladaha istiraatiijiyaddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho dhibco leh suurtagalnimo sare oo faa'iido ah qiimaha sarreeya ama hooseeya.
Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in xulashooyinka ugu badan ee faa'iidooyinka calaamadaha ganacsiga ay ku sii jeedaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!